Child sex offence education သက်ငယ်မှုဒိမ်းမှုများ ပပျောက်စေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေး ဇာတ်လမ်းတိုလေး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeChild sex offence education သက်ငယ်မှုဒိမ်းမှုများ ပပျောက်စေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေး ဇာတ်လမ်းတိုလေး
December 6, 2016 drkokogyi
သက်ငယ်မှုဒိမ်းမှုများ ပပျောက်စေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေး ဇာတ်လမ်းတိုလေးမှာ အလွန်ကောင်းမွန်လှပါသည်။
Sin Yaw Entertainment မှ ဘာသာပြန်တင်ပြထားပါသည်။
အားလုံးကျေးဇူးပြု ပြီး Share ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
← You or your military-men or DASSK or Rakhines are NOT trustworthy. Please formaspecial international investigation team under UN and let them enter and investigate accompanied by UN Peace-keepers without Myanmar military and police.
ယ နေ့ အ တွက် က ဗျာ… →